Eoropa Andrefana · Novambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Eoropa Andrefana · Novambra, 2012
Tantara mikasika ny Eoropa Andrefana tamin'ny Novambra, 2012
Espaina 26 Novambra 2012
Ny fampiasana hery nataon'ny vondron-kery polisin'i Katalonia antsoina hoe Els Mossos d’Esquadra [ca], nandritra ny fitokonambe [ca] tamin'ny 14 Novambra 2012 (#14N [ca]) no niteraka onjam-panamelohana an-tserasera. Niteraka fametrahana fanangona-tsonia [ca] ho fialan'ny minisitry ny atitanin'i Katalonia, Felip Puig, avy amin'ny antoko politika rezionaly efatra ity toe-draharaha nitranga tao antenantenan'ny fampielezan-kevitra manantantara ity.
Espaina: Fifidianana Katalana – “Garcia Avokoa Izahay Rehetra”
Espaina 25 Novambra 2012
Mitodi-doha mankany amin'ny biraom-pifidianana indray androany alahady, 25 Novambra 2012 ny any Katalonia izay ao raha mitokozihitra ny eo amin'ny toekarena ary mavaivay ny adihevitra momba ny fisintahana amin'i Espaina. Nanomboka tamin'ny alalan'ny lahatsary mampiady hevitra nivoaka tao amin'ny fantsona Youtube an'ny Antokom-Bahoakan'ny Katalana [es] (Partit Popular de Catalunya na PPC) izay mpitàna ny firaisampirenena ny fampielezan-kevitra, izay nifantoka indrindra tamin'ny adihevitra momba ny fahaleovantena [fr] tamin'ny herinandro lasa teo.
Paortiogaly 18 Novambra 2012
Nankatòavin'ny Fitsarana momba ny Lalàmpanorenana Espaniola Ny Fanambadian'ny Samy Pelaka
Espaina 18 Novambra 2012
Nankatòavin'ny Fitsarana momba ny lalàm-panorenana espaniola ny ankamaroany betsaka [es] tamin'ireo lalàna natolotry ny ny governemantan'i José Luis Rodriguez Zapatero tamin'ny taona 2005 (Antokon'ny Mpiasa Sosialista-PSOE [es]) izay miantoka ny fitovian-jo ka mamela malalaka ny fanambadian'ny lahy samy lahy na vavy samy vavy (pelaka).. Toy izao manaraka izao ny fanovana hita tamin'ny lalàna: “Manan-jo...
Takon'ny Fifandonana Ny Alina Ny Fitokonana Faobe Am-pilaminana Tao Portiogaly
Paortiogaly 16 Novambra 2012
Nitondra indray mandeha indray ny vahoaka ho eny an-dalambe nanerana ny firenena ilay fitokonana faobe tao Portiogaly ny 14 Novambra 2012, hijoroany hanohitra ny fisongan'ny politikam-pitsitsiana. Ny tena hery manosika ny vahoaka hanao fihetsiketsehana na izany aza, dia tsy takatr'ireo fampahalalam-baovao mahazatra loatra noho ny fisian'ireo hetsika mahonena "mahasarika kokoa ny maso": tamin'ny fiafaràn'ny andro iray nafotaka nanaovana hetsika am-pilaminana sy fitorevahana, ny fifanandrinana nivadika ho herisetra teo amin'ny polisy sy ireo mpanao hetsi-panoherana no zary lasa lohatenim-baovao mirantiranty.